तपाईं सुन्दर बन्न पार्लर धाउन पर्दैन ! अब अपनाउनुस् नरिवलको तेल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
तपाईं सुन्दर बन्न पार्लर धाउन पर्दैन ! अब अपनाउनुस् नरिवलको तेल
पुस २७ गते, २०७५ - १२:३३
३. तपाईंको सुन्दर त्वचाको लागिः यदि तपाईं आफ्नो छालालाई माया गर्नुहुन्छ भने नरिवलको तेल नियमित रुपमा लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको छालालाई हाइड्रेटेड राख्न मद्दत गर्छ र प्रदुषणबाट बचाउँछ । परिवर्तित मौसममा छालाको रक्षा गर्ने गर्दछ । यो एक प्राकृतिक मोइस्चुराइजर हो । नरिवल तेलले छालालाई डिअक्सिफाई गर्दछ त्यसकारण नुहाइसकेपछि नियमितरुपमा आफ्नो छालामा नरिवलको तेल लगाउनुहोस् ।
४. मेकअप रिमुभरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेः नरिवलको तेललाई सबैभन्दा राम्रो क्लिनरको रुपमा मानिन्छ । मेकअप हटाउनको लागि कपासमा नरिवलको तेल हाल्नुहोस् र यसको सहयोगले मेकअप हटाउनुहोस् । यसले मेकअप त हटाउँछ नै यसले छालाको भित्र रहेको ब्याक्टेरिया पनि हटाउने गर्दछ । एजेन्सी
पुस २७ गते, २०७५ - १२:३३ मा प्रकाशित